China Waist Trimmer Back Support Brace WS-05 mpanamboatra sy mpamatsy | marina
Zipo avo valahana.Corset miakanjo akorandriaka tsy misy tadiny, maka ilay lamba tsara indrindra sy taolana vy natao hanaovana akanjo manainga sy miakatra. Ity mpamorona vatana mainty tsy misy fangarony ity dia mendri-kaja tsotra, mifikitra amin'ny hoditra ary manintona anao endrika manintona iray. Tena mety ny mifanitsy amin'ny lobaka na mitafy eo ambanin'ny akanjo fety.
Rojo volafotsy.Corset latsa mba hahatonga anao ho tsara tarehy sy kanto. Akanjo tsara kalitao dia hahatonga anao hahatsapa ho malefaka sy ahazoana akanjo. Mora apetraka ary esorina amin'ny fanidiana ny maso sy ny maso. Ny fananganana taolana vy dia manome fanohanana lehibe sy fisondrotana.
Rojo mafy valahana.Mandoro tavy be loatra, mihinana kaloria fanampiny ary mamolavola fiolahana manintona. Ny fifehezana ny famolavolana vatana tena mafy orina dia manome anao vokany manala haingana. Mamolavola sy mamolavola ny andilam-balahinao ary miverina amin'ny endriny malama. Ny High Back Support dia manampy amin'ny famoronana fihetsika tsara. Mora apetraka ary esorina.
Previous: Kitapo lohalika fanatanjahan-tena nilona KS-02
Manaraka: Fametahana anti-slip Knee Sleeve KS-03
Mpanazatra ambony andilany avo lenta
Fehin-kibo manify kokoa
Back Belt Support Brace Manakana ny Humpback Adjust ...
Fandraisana an-tànana ny fanoherana anti-slip sy ny fanoherana mahatohitra K ...